Astrology – Page5– ဂျမ်းပုံ
မြန်မာနိုင်ငံကြီး အတွက်အရေးကြီးသော အနာဂါတ် ဟောကိန်းများ
September 25, 2020 - by yelin aung - LeaveaComment
မြန်မာနိုင်ငံကြီးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လာလာမေး ကြတယ် ကျွန်တော် ကလည်း ဟောကိန်းတွေ ဟောချက်တွေ ဘာမှမပြောချင်တာနဲ့ ငြိမ်နေခဲ့တာပါ ဒါပေမယ့် ယုံကြည်သူများက သိချင်တယ် တစ်ကဲကဲ မို့ ဟောကိန်းအချို့ ထုတ်ပြပါရစေ …. ၁. ကိုဗစ်ရောဂါဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အနည်းဆုံး လူတစ်သောင်း ဝန်းကျင်လောက် ကူးစက်သွားပါလိမ့်အုန်းမည်။ ၂. ပိတ်ပင်ထားသော မြို့များတွင်လည်း ထပ်မံတွေ့ ရှိရတတ်ပြီး …
သင် မွေးဖွားသည့် အချိန် က ပြောတဲ့ သင့်ရဲ့ အကြောင်း မှန် မမှန်ဖတ်သွားကြည့်
September 23, 2020 - by yelin aung - LeaveaComment
ည သန်းကောင်ကျော် တွင် မွေးသူများ ညမွန်း တည့်(၁၂)နာရီကျော် ၍ တစ်နာရီ၊ နှစ်နာရီ စသည့် အချိန် ပတ်ဝန်းကျင် တွင်မွေးဖွား သူများဖြစ်လျှင် ဘဝတစ် လျှောက်လုံး တွင် ဆွေမျိုး ညီအစ် ကိုမောင်နှမ များနှင့် နီးစပ် ဆက်သွယ်ရသော အကျိုး ကို ပေးကို ရလိမ့်မည်။ ညီအစ်ကိုမောင်နှမ ဆွေမျိုး သားချင်းများ …
September 10, 2020 - by yelin aung - LeaveaComment
ကုန်းဘောင်ခေတ်ကတည်းက ပေါ်ခဲ့တဲ့ နာမည်ကျော်တဘောင်တခုရဲ့ အဓိပ္ပာယ် ဖွင့်ဆိုက်ချက် (၁)ဟင်္သာမင်း အင်းကိုဆင်းမည်။ (၂)ထိုဟင်္သာကို မုဆိုး လေးနဲ့ခွင်းမည်။ (၃)မုဆိုးကို ထီးရိုးရိုက်လိမ့်မည်။ (၄)ထီးရိုးကို မိုးကြိုးပစ်လိမ့်မည်။ (၅)သံခမောက်ဆောင်း လေးယောက် ပေါ်လိမ့်မည်။ (၆) ဧရာဝတီ ခမ်းလိမ့်မည်။ (၇)လက်ပံလည်း ရှားလိမ့်မည်။ (၈)ကြက်မတွန်လို့ မိုးလင်းမည်။ (၉)ဗုဒ္ဓရာဇာကိန်းနဲ့အညီ နန်းသိမ်းလိမ့် (၁၀)ဗုဒ္ဓရာဇာသာသနာပြု မင်းကောင်းမင်းမြတ် ပေါ်လာပြီးနောက်ပိုင်း တိုင်းပြည်ကြီး …
သင့်အနာဂါတ်ကို ပြောပြပေးမယ့် Tarot ဗေဒင်
September 9, 2020 - by yelin aung - LeaveaComment
Zawgyi ဗေဒင်ဝါသနာပါသူတွေ အတွက် Tarot ကဒ် ဗေဒင်ကို ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်။အရင် ဆုံး လုပ်ရမှာကတော့ စိတ်ကို တည်ငြိမ်အောင်လို့ (၃)မိနစ်လောက် ငြိမ်ငြိမ်လေး နေပြီး အသက်ကို ဖြည်းဖြည်းချင်းရှုသွင်း၊ရှုထုတ်လုပ်ပါ။ အာရုံတွေ မများပဲ ကြိုက်နှစ်သက်ရာ ကဒ် တစ်ခုကို ရွေး ချယ်ပေးရမှာပါ။မရွေးခင်မှာ ကိုယ်တကယ်ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ ကဒ်က ဘာလဲ ဆိုတာကို သေချာ စဉ်းစားပြီးမှ ရွေးချယ်ပေးပါ …
ထီပေါက်မည်ဟု ကြိုသိနိုင်သော အိပ်မက် (၁၀)မျိုး
September 4, 2020 - by yelin aung - LeaveaComment
ထီပေါက်မည်ဟု ကြိုသိနိုင်သော အိပ်မက် (၁၀)မျိုး ထီအိပ်မက် ၁၀ ပါး။ ထီဆုကြီးပေါက်သူများ ကို လေ့လာခွင့် အင်တာဗျူးခွင့် ရခဲ့ဖူးသည်။ထီနှင့်ပတ်သက်၍ လူပညာရှိ ရဟန်းပညာရှိများနှင့် များစွာဆွေးနွေးဖူးသည်။ အနှစ်ချုပ်ကောက်ချက်ချလျှင် အတိတ်ကံနှင့် ပတ်သက်နေသော ဤ ထီသည် အများထင်သလိုရိုးရိုး ဒါနကုသိုလ်ကြောင့် (၃၀%)ဆိုတာထက် ပင့်သကူအလှူဒါ န(၇၀%)ကြောင့်ဟု ယူဆလျှင် ပို မှန်ပေမည်။ အလှူအတန်းကုသိုလ် ဒါ …
သိတဲ့သူ အလွန်နည်း နေသေးတဲ့ မြန်မာ့ ရိုးရာ ရွှေဝင် ငွေဝင် နိမိတ်များ
September 3, 2020 - by yelin aung - LeaveaComment
သိတဲ့သူ အလွန်နည်း နေသေးတဲ့ မြန်မာ့ ရိုးရာ ရွှေဝင် ငွေဝင် နိမိတ်များ ၁။အိမ်ထဲ ဖားခုန်ဝင်မူ ငွေရအံ့။ ၂။ အိမ်ထဲ ပိတုန်း ဝင်မူ ဧည့်သည်လာအံ့။ ၃။ အိမ်ထဲ ဓါးခုတ်ကောင်ဝင်မူ ပေးကမ်းမည့် ဧည့်သည်လာအံ့။ ၄။အလံတင်ရမူ ရည်မှန်းချက် အောင်မြင်အံ့။ ၅။တင်လိုက်သည့် အလံ ပြန်လျှောကျမူ ဘေးတွေ့အံ့။ ၆။ ခွေးလက်ဆောင်ရမူ၊ …
Total visitors : 559,999
Total page view: 810,568